Isibani se-UV Germicidal, i-UV Light, i-Ultraviolet Light - iKanfur
Isibani se-222nm Far UVC
Ibhokisi le-UV Sterilizer
Ukuqapha ikhwalithi yomoya
"Ikhwalithi engcono kakhulu, insiza ehamba phambili" ihlala iyinjongo yethu yenkampani, iKanfur izodlala ubuchwepheshe bethu ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, amanani entengo amahle kakhulu, inethiwekhi yokuthengisa ephelele kanye nensizakalo yokuthengisa ngemuva bese uzama konke okusemandleni ukwenzela Impilo Yomuntu!
Inzalo, ukubulala amagciwane, iphunga elikhethekile lisusa, likulethela impilo yokuthanda izinto ezithile
35W UV isibani
Ibhokisi lokuhlanza le-UV
UV ukukhanya inqola
Funda kabanzi mayelana
222NM FAR UVC LIYISIBANI
UKanfur uyaziqhenya ngokwethula ama-222nm Far UVC Lamps, ulayini wethu ohluziwe wamamojula wesibani we-222nm Far UV-C wezinhlelo zokuncishiswa kwamagciwane.
Izibani ezihlungiwe ezingama-222nm ezikude ze-UVC zingasetshenziswa ngokuphepha ezindaweni ezingenamuntu nezihlala abantu ngaphandle kokufaka engcupheni yezempilo kubantu lapho zisetshenziswa ngaphakathi kwemikhawulo yokuvezwa yamanje enconywe yi-American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®) noma izidingo ze-IEC 62471.
Akukho ukulimala kubantu nasezilwaneni, kuphephe kakhulu kunesibani sendabuko se-254 nm UVC
I-Proprietary Safety Filter Technology Ifakiwe Ukuqinisekisa Ukukhishwa kwe-Narrowband 222nm
IMercury Mahhala - Yemvelo Nobungane
I-Wavelength yeGermicidal esebenzayo
Ukuncishiswa Okuphumelelayo Kwamagciwane, Amagciwane Nezinhlamvu
Ithempelesha Yokusebenza Ebanzi
Ukuvula / ukuvala ngokushesha kumandla wokukhipha okugcwele
Akukho Ukuncishiswa Kwesikhathi Sokuphila Ngemijikelezo Eqhubekayo / Yokuvala
I-Kanfur inentambo yethu yokukhiqiza yobuchwepheshe ngobuchwepheshe obuphambili bokukhiqiza nokucubungula, ukukhiqizwa kwaminyaka yonke kufika kumasethi ayi-100000.
I-R & D yobuchwepheshe nezinzile, ithimba lezokukhiqiza nelokuthengisa, elinabasebenzi abangu-160, inkampani iletha amathalenta athuthukile njalo.
Kutholwe isitifiketi se-Patent
Ngethimba le-R & D eliqeqeshiwe, yonke imikhiqizo yathuthukiswa ngokuzimela futhi yakhiqizwa yithi, sithole izitifiketi zobuchwepheshe obunelungelo lobunikazi ezingama-50 ku ..
Ukuhweba kwasekhaya kanye nokuhweba kwangaphandle amaqembu amabili okuthengisa, athunyelwa emazweni angaphezu kwama-50 emhlabeni jikelele nokuthengiswa konyaka kuze kufike ku-usd4000000.
Umugqa Wokukhiqiza Ozimele
ini abantu bayakhuluma
Isibani se-UV sibukeka sisihle kakhulu futhi sizinzile, ngithole uma ngisebenzisa indodana yami. Ibuye ibe nesilawuli kude, okulula kakhulu ukusisebenzisa. Idizayini yokwenziwa komuntu ngempela. Kungokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kokuthenga.
Ukulethwa kwe-DHL kuyashesha, yizinsuku ezinhlanu kuphela engithole isibani sami se-ultraviolet. Ngiyisebenzisile ngokwemiyalo yayo. Kulula kakhulu, ngokuvala inzalo yesikhathi segiya, ngikholwa ukuthi kuzonginikeza igumbi lokuphumula elinempilo.
Ngeneliseke kakhulu ngalesi sibani se-UV. Ihlanganiswe kahle futhi ithunyelwa ngokushesha. Kulula futhi kuyashesha ukuyisebenzisa ngokulawula okukude. Igumbi lokuphumula, igumbi lokulala, igumbi lokugezela kanye nekhishi konke kubulawe amagciwane, ngiyabonga
Ukubulala amagciwane nge-Far-UV (222 nm Ultraviolet li ...
Ukubuka konke kobuchwepheshe be-Far-UV (222 nanometer) kanye namandla ayo okubulala amagciwane. Umphumela wobhubhane lwe-COVID-19 yisidingo esandayo sezindawo zomphakathi eziphephile, ezingenamagciwane. Kubalulekile ukunciphisa ubungozi embonini yezindiza yezentengiselwano, ethuthe abantu abayizigidi eziyinkulungwane emhlabeni wonke ngo-2 ...
Ubuchwepheshe BamaLambu WaseGermicidal
I-Germicidal Lamp Technology Lapho ucwaninga i-UVC Germicidal Fixtures, ungahlangabezana nezinhlobo ezahlukahlukene zobuchwepheshe besibani nokulungiswa. Zonke izibani ze-UVC empeleni ziqukethe imvilophu ye-quartz equkethe i-mercury namanye amagesi nama-electrode. Lapho isibani sishaywa, amandla b ...
Izinzuzo ze-UV-C Disinfection
Izinzuzo ze-UV-C Disinfection Systems ziningi, zifaka phakathi: Zisebenza kuzo zonke izinhlobo zezinto ezincane eziphilayo, kufaka phakathi amabhaktheriya, ama-virus, isikhunta kanye ne-protozoa Ayikho imikhiqizo ye-disinfection (DBPs) eyakha imali ephansi nezindleko zokusebenza Kulula ukusebenza nokugcina okuphephile nakwezemvelo f ...